प‌र्यटन – Page2– Etajakhabar
काठमाडौंः अब अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा यात्रा गर्ने नेपाली हवाई यात्रुहरुको मृत्यु भए बिमा बापत १ लाख ५८ हजार ३ सय ४० अमेरिकी डलर अर्थात करिब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पाउने भएका छन् । अन्तराष्ट्रिया हवाइ यात्रु सम्बन्धी महासन्धी नेपालको संसदले पास गर्नलागेकाले बढ्ने भएको हो । अब हवाइ यात्रुको न्यूनतम बिमा रकम वृद्धि हुने भएको छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था(आइकाओ) को मन्...
काठमाडौंः धेरैलाइ चासो हुन सक्छ नेपालको पाँच तारे होटलमा एकरातको कति रकम तिर्नुपर्छ ? तर तपाइ हामीले सोचे जस्तो महंगो भने छैन। नेपालको पछिल्लो समय पाँच तारे होटल क्रम समेत बढेको छ । हाल नेपालमा १० वटा पाँच तारे होटल रहेको भएपनि दुईवटा बन्द रहेको छ । नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटक मध्ये धेरै खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको बसाई प्रायः पाँच तारे होटलमै हुने गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालीहरु पनि कार्यक्रमहरु प...
काठमाडौंः गाउपालिकाले हेलिकप्टर प्रवेशमा निषेध लगायो भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर भयो त्यस्तै, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आफ्नो सीमा भित्र हेलिकप्टर प्रवेशमा निषेध गरेको छ । गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रका चराचुरुंगी र वन्यजन्तुलार्ड असर परेको भन्दै हेलिकोप्टर अवतरणमा रोक लगाएको हो । उद्दारका लागि अरु बेला हेलिकोप्टर अवतरण गर्दा त्यसबाट आउने आवाज र भ्राइबेसनले वन्यजन्तु नै भागेका ...
काठमाडौंः विश्वमा हरेक वर्ष १ अर्ब ३२ करोड पर्यटक घुम्न निस्किने गरेका छन् । यस्ता पर्यटकहरुको पहिलो रोजाईमा युरोपेली मुलुक फ्रान्स पर्ने गरेको छ । त्यस्तै विश्वभरबाट घुम्न निस्कनेहरुमा पनि सबैभन्दा धेरै पूरोपेलीहरु नै रहेका छन् । एक तथ्यांक अनुसार वार्षिक ६७ करोड युरोपेलीहरु भ्रमणमा निस्कने गरेका छन् । एशिया/प्रशान्त क्षेत्रमा ३२ करोड, उत्तर तथा दक्षिण कोरियाका २० करोड व्यक्ति पर्यटनका लागि देश ...
काठमाडौं: होटल भन्ने वित्तिकै सुविधा सम्पन्न पाँच तारे होटल झट्ट सोच्ने गरेका गर्छौ । तर विगत देखिको इतिहास हेर्ने हो भने पाँच तारे होटलभन्दा बढी लगानी गरेर खोलिएका सुविधा सम्पन्न रिसोर्टहरू महँगा र सुविधायुक्त छन् । नेपालमा पछिल्लो समय तारे होटल भन्दा पनि पर्यटक स्तरका रिसोर्टहरु खुल्नेक्रम झनै बढ्दै गएको छ । नेपालमा पाँच तारे होटलका भन्दा पनि बढी सेवा सुविधा दिएर खुलेका रिसोर्टहरु पुराना र नया...
काठमाडौं: विमानमा यात्रा गर्दा समान्य, विशिष्ट र अति विशिष्ट सीटमा बसेर यात्रा गर्न पान्छ । त्यसका लागि आफूसंग कति बजेट छ त्यसले निर्धारण गर्छ । विश्वका धेरै हवाई यात्रुहरू इकोनोमिक क्लासमा यात्रा गर्छन् । इकोनोमिक क्लासमा सामान्य सीट हुन्छ । विमानमा भएका सीटहरु मध्ये धेरै इकोनोमिक क्लासका सीट हुन्छन् । महगो हुने र सीमितले मात्र यात्रा गर्ने भएकाले विजनेश क्लासका सीट कम हुन्छन् । बिजेस क्लास तथा ...
नेपालका यी १० होटल जुन सुविधासम्पन्न तर सस्ता छन्, एक रातको कति पर्छ ?
काठमाडौं: पर्यटक स्तरका होटल भन्ने वित्तिकै महँगो हुन्छ भन्ने भान धेरैलाई पर्छ । कम पैसामा कहाँ होटल पाइन्छ ? यो सबैको चासो र खोजीको विषय समेत हुने गरेको छ । तर, नेपालमा राम्रा पर्यटक स्तरका होटलमा १ हजार २ सय देखि ३ हजार रुपैयाँ सम्ममा पाइन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । ट्रिप एड्भाजरीले केही समय अगाडी नेपालका सस्ता तर राम्रा होटलहरुको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा नेपालका १० सुविधासम्पन्न ...
२३ अर्ब रुपैयाँका दुई वाइडबडी जाहजको खरिदमा घोटला ! वारेन्टी नै नभएको खुलासा
काठमाडौं: नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलोपटक खरिद गरेको दुई थान वाइडबडी जहाजको वारेन्टी नै नरहेको पाइएको छ । जहाज खरिद सम्झौतामा नयाँ जहाजको इन्जिन तथा स्पेयर्स पार्ट्सको वारेन्टी र ग्यारेन्टी कति समय हुने विषय नै उल्लेख नगरेको भेटिएको छ । निगमले ‘हाईफ्लाई एक्स’सँग गरेको सम्झौतामा वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीको विषयमा दुवैपक्ष मौन बसेको भेटिएको छ । उक्त विषयले बोर्ड बैठकमा पटक–पटक संस्कृति, पर्यटन तथा ना...
६ महिनामा नेपाल आए पाँच लाख २० हजार पर्यटक
काठमाडौं: सन् २०१८ को पहिलो ६ महिनामा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिएका छन् । जुन महिनासम्ममा ५ लाख २० हजार १४ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका हुन् । सन् २०१८ को पहिलो ६ महिनामा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिएका छन् । जुन महिनासम्ममा ५ लाख २० हजार १४ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका हुन् । नेपालले सन् २०११ को पर्यटन वर्षमै १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखे पनि ७ वर्षपछि बल्ल ...
नेपालमा अब दुई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा, भैरहवा विमानस्थलमा पुसबाटै उडान
काठमाडौंः निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउँदो जनवरी १ (पुस तेस्रो साता) बाट परीक्षण उडान गर्नेगरी निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि मुख्य कामको रूपमा रहेको धावनमार्गको अन्तिम चरण प्रारम्भ भएको छ । ३ हजार मिटर लम्बाइ रहेको धावनमार्गमा तयार रहेको बेसकोर्समा आइतबारबाट बिटुमिन (अलकत्रा) हाल्ने काम सुरु भएको छ । अलकत्रा हालेपछि धावनमार्गलाई कालोपत्रे गर्ने का...